Farjanada Jowhar aada iyo Fulaynimada Waare ! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Farjanada Jowhar aada iyo Fulaynimada Waare !
Ahmed weheliye Gaashaan 26 January 2019
Maamulka hirshabeele Oo ay caasimadiisa Magaalada muqdisho u jirto 90KM ayaa marnaba Waxaana dhici karin ineey ku safraan Dhulkaas masaafa ahaanta aadka u yara.
wadadan isku xerta labada magaalo ayaa kulansatay burbur xoogan iyo amni xumo daran inta uu maamulka Hirshabeele uu gacanta ku haayo madaxweynaha hada talada haayo ee mohamed abdi waare waxaa jidkan lagu dilay saraakiil ciidan , Xildhibaano , iyo madaxkale oo iskugu jiray heer federral iyo heer gobol.
Xoogaga alshabaab oo aad ugu xoogan inta u dhaxeeysa labada gobol ayaa waxeey ka fuliyaan weerarao gaadma ah oo lagu beegsado Gawaarida saanada iyo kuwa madaxda ee wadadaas isticmaala.
Cidamada malatariga Soomaaliya Oo gacanta ku haaya Amaanka Madaalooyinka qaar waxeey Cabsi iyo Feejignaan xoogan uga jiraan weeraro markasta uga imaan kara Dhaqdhaqaaqa al shabaab Oo aad ugu Xoogan Degmooyin badan oo dhaca Gobolada Shabeelada dhexe, Sh/Hose iyo hiiraan.
Madaxweynihii hore ee hirshabee Mr Cosoble ayaa ka tagay qorshe lagu dhisaayo ciidamada gaarka ah ee Maamulka hirshabeele Qorshahaas oo hadii uu socon lahaa Hirshabeele Badankeed soo gali laheeyd gacanta Maamulka ayaana suuroobin maadama madaxweyne cusuble ay xilka ka tuureen xildhibaanada maamulkaas.
Dowlada Federlka waxeey miisaaniyad xoogan ku bixisaa ciidamada ku sugan deeganada hirshabeele , Balse madaxweeyne waare uma uusan maareeyn ciidamadaasi Sidaa laga rabay , waxaana lagu eedeynayaa in Madaxweeynuhu uu qarash iyo gunooyinkaas u isticmaalo siyaaboiyin kale.
Mr ware marnaba sooma hadal qaadin Dib u xureeynta deegaanada cabsida badan ay ka jirto iyo Badbaadinta saldhigyada ciidan ee ah sugayaasha weerarada Dhaqdhaqaaqa al shabaab .
Saaxiibada xildhibaano ku quur baxay wadadan oo noo waramay ayaa Aaditaanka jowhar iyadoo dhulka la isticmaalaya ku misaaliyay in ay tahay u bareerida nolol ama geeyri madaama saaxiibabadan ay ku waayeen halkaas.
Maxeey 90KM Cabsi dartee u keneysaa in Diyaarad loo raaco ?
XOG:- Qowmiyadaha dhulkooda ku dhiban Soomaalida, Kurdiyiinta, iyo falastiniyiinta.